Tube light light leh 3 sano warranty 150lumen halkii watts
Inkastoo cuntadeenu rabto in korantada korontada ay sii korodho, haddana wacyi-gelinta aannu u baahannahay si aan u kordhino waxtarka. Hal aag oo ganacsi kastoo ganacsi kastaa awoodi kari waayay tamarta korontada oo kaliya, laakiin hubi in deegaanku faa'iido u leeyahay, waa iyada oo loo marayo beddelidda tuubooyin dhaadheer oo leh LED cusub (taakulaynta iftiinka iftiinka).
Horumarinta tiknoolijiyada LED-ga ayaa awooday Tube light light in la soo saaro taas oo si fudud u beddeli doonta kuwa hadda jira, oo bixiya caddad la mid ah lakiin 60% hoos u dhaca isticmaalka korontada. Inkastoo arrintan lafteedu ay ku filantahay sababo ku filan oo loo baddalo, faa'iidooyinka caafimaadka iyo badbaadada ee dheeraadka ah ee la xidhiidha alaabadu waxay xaqiijinaysaa nadiifin, jawi wanaagsan oo ammaan leh.
← LED-aqoonta iftiinka
Ogeysiiska Magaca Shirkadda Isbedelka →